Talaal Dunida dhan iska diiday oo Soomaliya la keenay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Talaal Dunida dhan iska diiday oo Soomaliya la keenay
Waxaa maanta magaalada Muqdisho la keenay 300,000 oo talaal nooca Oxford-AstraZeneca, oo loogu tala galay in looga hortago cudurka safmarka ah ee Covid-19 oo Soomaaliya hada kusii faafaya.
Talaalkan ayaa dowlada Soomaaliya sheegtay in la siin doono shaqaalaha safka hore ugu jira la dagaalanka cudurkan, dadka u nugul cudurka iyo sidoo kale shaqaalaha dowlada ay ku jiraan masuuliyiinta.
Waxaa soo saaray talaalkan maanta dalka la keenay Shirkadda AstraZeneca oo kaashanaysay jaamacadda Oxford, waxaana talaalkan la sheegay in looga hortagayo fayraska Covid-19, waxa uuna talaalkan unugyada difaaca jirka u diyaariyaa sidii ay 80% uga hortagi lahaayeen in ku dhaco qofka Covid-19.
Qaar kamid ah Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa kuyaala Yurub iyo Aasiya ayaa joojiyay isticmaalka talaalkan kadib markii la sheegay in qaar kamid ah dadkii la siiyay ay ka dhaxleen dhibaatooyin kale.
Dadka la siiyay talaalkan ayaa la sheegay in qaarkood u horseeday dhibaatooyin ay kamid yihiin xijiroga dhiiga, waxaana hada sii kordhaya wadamada walaaca ka muujinaya talaalkan isticmaalkiisa.
Wadamo ay kamid yihiin Norway, Denmark, Netherlands iyo Ireland,ayaa si kumeel gaar ah u joojiyey soo saarista iyo isticmaalka tallaalka AstraZeneca, halka wadamada Talyaaniga, Holland iyo kuwa kale sheegeen in baaritaan ku sameyn doonaan talaalkan.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa meesha ka saartay walaacan laga muujiyay talaalkan AstraZeneca, waxa ayna Hay’adda sheegtay in waxyeelada la warinayo in ay ka
Previous articleMidoowga Mushqraxiinta oo ka hadlay Dacwada Badda
Next articleWaxa Qorey Musharax Madaxweyne Hassan Ali Khaire
Ciidamo ka tirsan Askar Pakistaan oo lagu toogtay Bar Kontorool...
Boliska dalkaasi waxay sheegeen in 2 Askari toogasho lagu dilay xilli dambe oo xalay ahayd. Ciiddaankaasi waxaa lagu toogtay Bar Kontorool oo isku xirta Magaallooyinka...
Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ee Jubaland oo sheegay in...